Ogeysiis - BBC News Somali
4 Oktoobar 2013
Image caption Abaalmarinta riwaayadda raadiyaha
Waxa hadda furan oo la bilaabayaa tartankii sannadkan 2013 ee Riwaayadda Raadiyaha ee ay wadajirka u abaabulaan BBC-da iyo Qaybta Dhaqanka ee safaradaha Ingiriiska.
Haddaba ma deggan tahay debadda dalkan Ingiriiska?
Ma jeceshahay in riwaayad aad adigu qortay oo aad samaysay amma sheeko, in la faafiyo oo la gaadhsiiyo malaayiin qof oo ka mid ah dhageystayaasha caalamiga ah ee BBC-da?
Haddii ay sidaas tahay, imika ayaad haysataa fursaddii aad kaga qaybgeli lahayd.
Waxa jira laba abaalmarinood oo heerka koowaad ah – Riwaayadda/qoraalka ugu fiican oo lagu qoro af-Ingiriis, dadka af-Ingiriisgu u yahay afka koowaad amma hooyo, iyo tan labaad oo ah qoraal af-Ingiriis ah oo uu qoray qof af-Ingiriisku u yahay afka labaad. Labaduba waxay ku guuleysan doonaan inay helaan abaalmarin dhan £2,000 midkiiba, iyo safar ay ku yimaaddaan magaaladan London, si ay goobjoog uga noqdaan marka la duubayo riwaayaddooda, ugana soo qaybgalaan munaasabadda bixinta abaalmarinaha.
Jaamicadda Open University oo aannu iska gaashanaynno haatan soo saaridda riwaayadahaasi, waxay iyana ku soo daraysaa abaalmarin kale – waa abaalmarinta la yidhaa Georgi Markov, oo la siinayo qoraalka ugu habboon. Qofka ku guuleystaa waxa uu iman doonaa magaalada London muddo laba toddobaad ah oo uu la joogi doono qaybta riwaadadda raadiyaha ee Radio London iyo BBC-da Caalamiga ah.
Faahfaahin dheeraad ah oo la xidhiidha arrimahani, waxad ka heli kartaa:www.bbcworldservice/radioplay